nyonyomg's blog on decentralized web
ဖုန်းထဲမှတ်စုလုပ်ထားပါ။နောက်တစ်ခုက ကိုယ့်ဖုန်းထဲက note မှာ folder လေးခွဲပြီး ကဏ္ဏအလိုက် ခေါင်းစဥ်တပ်ပြီး ဖိုင်လုပ်သိမ်းထားလိုက်ပါ။ ဥပမာ။ အလုပ်ကိစ္စ ဆိုတဲ့ခေါင်းစဥ်အောက်မှာ ကိုယ်မေ့သွားနိုင်တဲ့ အလုပ်ကိစ္စတွေ သီးသန့်မှတ်ပေ့ါ၊
မဆန့်မပြဲစားသုံးခြင်းအစာမစားရင် ဦးနှောက်မှာ အာဟာရ ချို့တဲ့တယ်ဆိုပေမယ့်လည်း ဒါကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက် အစားအစာ တွေ အလွန်အမင်းစားသုံးခြင်းဟာ မှားယွင်းပါတယ်။ ဒါဟာလည်း သင့်ဦးနှောက်ကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က လိုအပ်တဲ့ အစာ ပမာဏ
စိတ်မကောင်း မဖြစ်ပါနဲ့အမြဲလိုလို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံပေးပါလျှက်နဲ့ တစ်ကြိမ်လေး ပျက်ကွက် မလိုက်လျောပေးမိလိုက်လို့ ငြို ငြင်သွားတတ်ကြတဲ့အခါ စိတ်မကောင်း မဖြစ်ပါနဲ့။
ရည်မှန်းချက်ရည်မှန်းချက် ရှိဖို့လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မျှော်လင့်နေရုံနဲ့တော့ ဘာမှဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်နဲ့ အကောင်ထည်ဖော်ဖို့လိုပါတယ်။
ရုန်းကန်တက်လာတယ်သင့်ကို ဂရုမစိုက်တဲ့ သူတွေကို သင် ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။ သူတို့ကြောင့် သင်ဟာ ကိုယ့်ဘဝကို ရုန်းကန်တတ်လာတယ်။
ထာဝရအခိုက်အတန့်လောက် ခံနိုင်သလိုလို ပွင့်ဆဲပန်းတိုင်း မလန်းနိုင်တာသိပါရဲ့ ကိုယ့်ရင်ထဲ ကာလကြာမြင့်စွာ စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ မြတ်နိုးစွာယုယခဲ့တဲ့ပန်း ထာဝရလန်းစေချင်တယ်
ထက်မြတ်သူထက်မြက်သူက သင့်လျော်တဲ့အချိန်မှာ တုံးအချင်ဟန်ဆောင်တယ်။ ညံ့ဖျင်းသူက ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထက်မြက်သူလုပ်ပြီး ဂုဏ်ဖော်တယ်။
ငှက်ကလေးတွေကိုပဲကြည့်ပါငှက်ကလေးတွေပဲကြည့် အတောင်ပံစုံနေတဲ့အထိကို သူ့မိခင်ကြီးက အစာခွံနေတာတွေ့ဖူးကြသလား? ကျွန်​ေတာ်တို့ လူသားတွေ တစ်ချို့က မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်သက်ဝင်မှု အားနည်းကြတယ်ဆိုတာပဲ။ ငှက်ကလေးတွေက အတောင်ပံစုံတာနဲ့
ဥပမာဥပမာ မင်းစျေးသွားတယ် ရောင်းမယ်သူရှိလို့ဝယ်တဲ့သူရှိတာ အဲ့လိုပဲ ဝယ်တဲ့သူ ရှိနေလို့ရောင်းတဲ့ သူတွေ ရောင်း နေကြတာပါမာနတစ်ခုကိုအခြေခံပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမြင့်ဆုံးမမှတ်ပါနဲ့ ကျေးဇူးဆိုတာလွယ်လွယ်ပြောရရင် ကိုယ်
ချစ်မပြတတ်လို့ပါဆိုတဲ့ချစ်မပြတတ်လို့ပါဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေအနောက်မှာ သိသိသာသာ တစ်ဖုံ မသိမသာတစ်မျိုး ပစ်ထားတတ်တာလေ ပြီးတော့ ကိုယ်ပေးတဲ့ နားလည်မှုကိုပဲ လိုချင်ပြီး သူကျတော့ နည်းနည်းလေးမှ နားလည်မပေးတာမျိုးပေါ့ ..
လုပ်ငန်းမိမိရဲ့လုပ်ငန်းမှာ ဝင်ငွေရလာပြီဆိုတာနဲ့ ကျေနပ်နေကြသလား။ အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ ကိုယ်လုပ်ငန်းမှာ အစွမ်းကုန်လုပ်နိုင်လာပြီဆိုရင် ကိုယ့်လုပ်ငန်းတိုးတက်လာလိမ့်မယ်။ မိမိရဲ့ဝန်ထမ်းတွေ အုပ်ချုပ်ပုံ၊ customer တွေ
တခါတလေတစ်ခါတစ်လေ မလိုချင်တာတွေ မင်းဆီရောက်လာတတ်သလို မင်းလိုချင်တဲ့ အရာတွေလည်း မင်းနဲ့အဝေးဆုံးကိုရောက်နေတတ်တယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ၀မ်းနည်းစရာတွေက ငါ့ဆီကိုပဲ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ရောက်လာတတ်သလားလို့
အလကားရနေပါစေမိမိရသင့်တဲ့ အတိုင်းအရှည် ပမာဏကို အသိစိတ်နဲ့ ဆင်ခြင်တတ်ပါစေ။ သိက္ခာတရားဆိုတာ မွေးမြူသင့်ပါတယ်။ အခက်အခဲပြဿနာနဲ့ ကြုံရပါစေ မိမိကိုယ်ပိုင် အစွမ်းအစနဲ့ အရင်ဖြေရှင်းတတ်ပါစေ။ အကူအညီကို အလွယ် တကူ လိုချင်တဲ့သူ
ညှိထားခဲ့နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပါအိမ်ထောင်သက်တလျောက် အချစ်မပျက် သာယာပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ထောင်တခုကို တည်ထောင်လိုတယ်ဆို ချိုမြိန်တဲ့နေ့ရက်တွေကို ဘယ္လို ထိန််းသိမ်းသွားမလဲ ၊ ဖန်လာတဲ့နေ့တွေကို ဘယ်လိုအတူပြင်ဆင်ကြမလဲ ၊ ချဉ်လာတဲ့နေ့တွေကို
ကိုးဆယ်ကိုးယောက်ထဲကိုးဆယ်ကိုးယောက်ထဲ အရင်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့သူတရာမှာ တစ်ယောက်လောက်တော့ ငဲ့ညှာစိတ်နဲ့ ပြန်ကောင်းတတ်ပေမယ့် အဲဒီတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်လူဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်နေပြီး ကျန်တဲ့(၉၉)ယောက်ဟာ မပြောင်းလဲတတ်တာကို မေ့နေရင်တော့
Paradise Concludes - POB WOTWThe paradise that captivates us also serves to guides or force us through life. Paradise is an ideal that lasts until we donanew persona. It is the concept ofaperfect lifetime moment that remains static
api.deathwing.me Important Announcement | Anti-PhishingHello everyone! Prelude As you may know, the world of cryptocurrency is filled with scammers who would like to obtain the earnings of someone else without too much work. Unfortunately, due to the nature
给儿子办了电话卡（副卡）之前给儿子买了电话手表，需要使用SIM才能使用，为了避免他等待得过于着急，我把自己的一张电话卡拿给他用。 (图源 ：pixabay) 不过这样一来，我的备机里就没有电话卡啦，虽然也没人给我那个号码打电话，但是外出时备机就没4G网络用了，总之还是有点不便。 于是一直想着给他办张副卡，打电话咨询联通，副卡10元每月，可以和主卡共享语音通话、流量等套餐，听起来还是不错的。
Terracotta Garden: A Little Taste of Angkor Wat or My Son in Regional LamphunIt's fascinating to watchacity evolve, or to unravel, as the case may be during Covid. Extended tourist closures and travel bans have GUTTED the 700 Old City of Chiang Mai. It is NO exaggeration to say
Escape in the Beautiful Olango Island, Cebu Philippines 🏝🏖 | #LakwatsaniIntoy Diary 005Heyaaaah Hiveeers !!! Welcome to #LakwatsaniIntoy Diary 005 | Escape in the Beutiful Olango Island, Cebu Philippines🏖🏝. I would like to share to you one of the stunning island that you should write in